iWork, efitrano fiasan'ny Apple (I): Pejy | Vaovao IPhone
iWork, efitrano fiasan'ny Apple (I): Pejy
Nanavao ny Apple i Apple suite birao feno. Pejy, Nomery ary Keynote, ny fampiharana azy ireo amin'ny fikarakarana teny, takelaka ary famelabelarana tsirairay avy, dia nahazo fiasan-tarehy tsara ary koa fiasa vaovao ao amin'ny kinova ho an'ny OS X sy iOS, nefa tsy hadino ny zava-misy fa Apple manolotra azy ireo maimaim-poana miaraka amin'ireo fitaovana novidiana tamin'ny 1 septambra na aorian'ny. Izany no antony anirianay ny handinika ny tsirairay amin'ireo rindranasa amin'ny fomba antsipiriany kokoa, ary manomboka amin'ny Pejy, ilay teny hoe processeur.
Ny iray amin'ireo zava-baovao ao amin'ny pejy (sy ny sisa fampiharana ao amin'ny biraon'ny birao) dia ny Ny fifanarahana eo amin'ny kinova iOS sy OS X dia vita. Tsy hafahafa ny manokatra antontan-taratasy amin'ny iPad noforoninao tamin'ny Mac-nao ary nisy varavarankely niseho nampitandrina anao fa tsy nifanaraka tanteraka izy io. Tsy hitranga intsony izany, raha mbola mampiasa ny pejy vaovao an'ny pejy ho an'ny Mavericks ianao, mazava ho azy. Izay antontan-taratasy rehetra voatahiry ao amin'ny iCloud dia azo idirana avy amin'ny Mac, iOS ary avy amin'ny tranokala iCloud mihitsy, andao tsy ho adinontsika fa manana ny fampiharana pejy izy.
Manolotra antsika i Apple a modely marobe ahafahantsika manomboka ny asantsika amin'ny iPad sy iPhone. Raha tsy te hampiasa na iza na iza misy default isika dia afaka misafidy foana ny safidy hampiasa antontan-taratasy banga ary isika no hamolavola azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny fikirakirana zavatra dia tena intuitive. Misafidiana sary iray, kitiho ny borosy, ary alamino izany. Sarotra ny manao azy tsotsotra.
Ao anatin'ny menio dia manana safidy bebe kokoa koa isika, toy ny mety hanisy sisintany, manitsy ny lokony, ny hateviny ary ny endriny. Saingy ny safidy dia tsy miafara amin'ny fahafaha mampiditra sary, saingy mazava ho azy fa afaka mamorona latabatra, sary, haino aman-jery ary endrika efa nomanina.
Izy rehetra miaraka amin'ny safidy hanovana ny toeran'ny singa nofidinao. Miezaha mamindra azy dia ho hitanao ny fizarana ny lahatsoratra manodidina azy. Avelao amin'ny toerana mety indrindra amin'izay tadiavinao izy, ary miasà hatrany, aza mila miahiahy momba ny famonosana ny lahatsoratra manodidina azy.
Ianao koa dia manana fitaovana mahazatra kokoa an'ny mpikirakira solosaina: mpanamarina ny tsipelina, isa ny teny, fahaizana manampy hevitra, torolàlana hanampy anao hizara ny atiny, fitsipika ... hadino fa eo alohan'ny iPad na iPhone ianao, afa-tsy ny fameperana miharihary apetraky ny haben'ny efijery amin'ilay fitaovana. Ny interface rehetra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fanaraha-maso, ka tsy hanana olana amin'ny fitetezana ireo menus ianao.
Manana ny keyboard ihany koa hotkey tab, fampifanarahana an-tsoratra, ny karazana sy ny habeny, ny famolavolana lahatsoratra (sahisahy, italiana ary misy tsipika ambany) ... Tsy ho vitanao ny tsy mandeha amin'ireo fiasa Mac izay tsy anananao amin'ireo kinova iOS.
Fampiharana iray izay soloina soloina solosaina mahazatra mahazatra indraindray, ary manana tombony lehibe ny fahafahany manomboka miasa amin'ny fitaovanao, ary mamita azy amin'ny Mac na amin'ny solosaina misy fidirana amin'ny Internet noho ny kinova fanaovan-tserasera. Ary aza adino ny safidy ny fiaraha-miasa, izay mamela olona maromaro hiditra amin'ilay antontan-taratasy mitovy aminy ary hiasa ao. Izay antontan-taratasy noforonina dia azo alefa amin'ny mpandray amin'ny alàlan'ny safidy maro: AirDrop, mailaka, hafatra, Twitter, Facebook ... ary hadino ny olana mifanentana, satria azonao atao ny manondrana ireo antontan-taratasy any amin'ny ePub, Office na PDF endrika avy amin'ilay fampiharana mihitsy.
Fanazavana fanampiny - Ny fampahalalana rehetra momba ny fanavaozana ny iWork sy iLife ho an'ny fitaovantsika (I)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iWork, efitrano fiasan'ny Apple (I): Pejy
Fanontaniana iray, mitentina 10 euro ve ity fampiharana ity? Amin'ny ipads mini dia ho 10 euro ihany koa ny vidiny sa ho maimaim-poana?
Maimaimpoana amin'ny fitaovana iOS novidiana rehetra. 😉
ary maninona no mivoaka dia 9 euro no vidiny? XD
Satria izany no vidiny. Fa raha mividy fitaovana vaovao ianao, rehefa ampandrenesinao dia hanome anao fotoana hividianana azy ireo maimaim-poana.
Inona ny rindranasa hafa manome anao fotoana hividianana azy ireo maimaim-poana raha mividy fitaovana vaovao ianao?
IWork rehetra ary iLife rehetra, miampy ireo maimaimpoana rehetra.
Fanontaniana iray, misy rindranasa misintona mozika maimaimpoana amin'ny ios 7? Mieritreritra ny hividy ipad mini 2 aho fa mila mandoa zavatra maro ianao ... tsy hitako izay hatao
Tsy hahita izany karazana fampiharana izany ao amin'ny AppStore ianao
Celia Acua Tiquet dia hoy izy:
Manana mini iPad aho izay te-hahazo rindranasa hanoratako fa tsy afaka aho, misy manampy ahy
Valiny tamin'i Celia Acua Tiquet
Ahoana ny fomba hahazoana takelaka ofisialy
Demian dia hoy izy:
Ary mbola tsy afaka manonta amin'ny loko mainty sy fotsy aho, singa iray tena ilaina ho ahy. Tena ratsy…. 🙁
Valio amin'i Démian
Raigada dia hoy izy:
Manana mini iPad aho tamin'ny taon-dasa ary hatramin'ny fanavaozana dia manome olana be dia be amin'ny fisafidianana lahatsoratra aho, toa izany koa no mitranga amin'ny olon-kafa?
Esory ny vokatra Parallax ao amin'ny iOS 7
iOS 7.0.3 dia manamboatra ny olana hafainganam-pandeha amin'ny iPhone 5s